Malunga nathi - Changzhou Suxing Century Apparel Co., Ltd.
Iindleko zezabelo Changzhou Suxing Century Apparel Co., Ltd.
Ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ngamaxabiso akhethekileyo kunye neenkonzo ezisemgangathweni
Ibisoloko ikho ukusukela ngoko Ngo-1996,Gxila kwimveliso yengubo
ukunyaniseka, ukujolisa kubathengi, kugxile kwimarike, kusekwe kwitekhnoloji, kuqinisekiso lomgangatho.
Inkampani yeSu Xing ibekwe kwisixeko saseChangzhou, kwiPhondo laseJiangsu, China. Lishishini elidibanisa imveliso kunye norhwebo. Yasekwa ngonyaka ka-1992, inkampani ngoku ingumnini Changzhou Suxing ingubo Co., LTD Hubei Suxing ingubo Co., LTD Changzhou Suxing ingubo Co., LTD Le nkampani iye imigca imveliso 10, abasebenzi abangaphezu kwama-580 kunye neentengiso ngonyaka $ 55 yezigidi. Ngo-2012, iNkampani yasekwa Hubei Suxing ingubo Co., LTD
Inkampani lelona shishini likhulu kwimveliso yengubo kwindawo yaseLiangzihu, kwisiXeko sase-Ezhou, kwiPhondo laseHubei. Inabasebenzi abangama-980 kunye nemigca ye-31 yendibano, enexabiso lonyaka lokukhutshwa kwezigidi ezingama-30 zeedola zaseMelika. Inkampani ye-Su Xing ebambelela ngokungqongqo, ukuthembeka kwefilosofi yeshishini, iminyaka emininzi ngamaqabane aphambili adwelisiweyo. Iye yaba lishishini elikhokelayo changzhou kunye Hubei amashishini ingubo zasekuhlaleni. Izatifikethi ezininzi, isatifikethi sasekhaya "se-ISO9001", saseMelika "sokuPakisha (uxanduva lokuvelisa impahla yengubo), isatifikethi seRCS, isatifikethi seRDS, isatifikethi sokulawula isikhululo sezixhobo ezikude, i-HIGG SLCP, njl. Advanced lworhwebo kumazwe angaphandle lweshishini "," Umgangatho ukuthembeka kwamashishini Chinese "," Changzhou Garment Industry Association "usekela sihlalo wenkampani njalo njalo.
Q: Uyiqala njani iprojekthi?
A: Ukuqala iprojekthi yakho, nceda usithumelele imizobo yoyilo kunye noluhlu lwezixhobo, ubungakanani kunye nokugqiba. Emva koko, uya kufumana locaphulo kuthi ngaphakathi iiyure ezingama-24.
Q: Asiqhelananga nothutho lwamanye amazwe, ngaba uya kuyisingatha yonke into enezinto?
A: Ngokuqinisekileyo. Amava eminyaka emininzi kunye nomhambisi wexesha elide osebenzisanayo uya kusixhasa ngokupheleleyo. Ungasazisa kuphela umhla wokuhanjiswa, emva koko uya kufumana iimpahla eofisini / ekhaya. Ezinye iinkxalabo zishiya kuthi.
Q: Kuthatha ixesha elingakanani ukwenza isampulu?
A: Ngokwesiqhelo isampula yeproto ithatha iintsuku ezingama-3d, kwisampulu yesms ithatha iintsuku ezi-7-10.